TelePrompter: Yako Yepamhepo Nyanzvi Teleprompter | Martech Zone
TelePrompter: Yako Yepamhepo Nyanzvi Teleprompter
Mugovera, December 5, 2015 Mugovera, December 5, 2015 Douglas Karr
Kazhinji yenguva yandinotaura, ini ndinoda kutaura zvakasununguka uye kuva nezviratidzo zvakakura mukati mese mharidzo yangu. Nenzira iyi, ini ndinoratidzika kunge ndoga uye ndinogona kutarisa pane kugamuchirwa kwekutaura nevateereri kwete mazwi ari pachiratidziri. Nekudaro, pane nguva - senge muYouTube mavhidhiyo - kwandine nguva shoma uye ndinoda kunyora script.
Kunamatira mazwi mugwaro uye kubhiza saizi yefonti kuti itaridzike ndiyo imwe nzira yekunyepedzera kuva nepropterter. Ehezve, kupururudzira uye kuchengeta nzvimbo yako ndiwo chaiwo marwadzo muchigunwe. Makore mashoma apfuura, takagovana chishandiso ProPrompter Desktop, iyo inobvumidza iwe kuti utarise wakananga pawebhu yako kamera uchinyora.
Kunyange ProPrompter ichipa yayo teleprompter application, pane imwe nzira yave kuwanikwa online. Teleprompter ine Software seSevhisi kunyorera online uko iwe kwaunogona kurodha yako script (kana script kune vanhu vazhinji), isa nguva dzakatarwa, uye kunyange kuisa mumifananidzo. Iwe unogona kuita zvese izvi mahara, kana chengeta zvinyorwa zvako zviripo sechikamu chekunyorera.
TelePromptor inodzidzisa matauriro aungaita sehunyanzvi, uchishandisa patent-ichimirira tekinoroji yakapihwa simba kupfuura zviuru gumi zvekutaura. Uchishandisa avhareji fonetiki yenguva nzira, unogona kurira senge zvayakanakira! Yakavakirwa mugore, TelePromptor ndeye nyanzvi teleprompting application ine yakachena, mainjiniya mushandisi inongedzo kune chero munhu anoda kuverenga script mukamera.
Iyo yekugadzirisa skrini inozvitsanangudza, ichipa kugona kuwedzera mifananidzo, kuseta maspika, uye kugadzirisa mabhureki.
Mukati mechiratidziro chemutambo, iwe unokwanisa kuwana yako script pamwe neyakareba nguva. Pakati pepamusoro ibha yekufambira mberi yenyaya yako ine mabhureki akanyatsotsanangurwa naB. Idzo nhamba nemavara anoenderana ndezvekubatanidza maspika akasiyana. Ingo isa script yako, seta nguva yako yekufema kana kumbomira, uye woenda!
Sezvo iyo teleprompter inoteerera uye ichitamba mukati mebhurawuza, inogona kutambidzwa mune yakazara modhiyo modhi pane chero chishandiso - desktop, piritsi kana nhare.
Tags: Pamhepo Kushambadzira Musanganoonline teleprompterkutaura teleprompterspeechesteleprompterteleprompter apptelepromptingteleprompting application